January 2010 ~ brazesh
डेरावाल-दोस्रो दर्जाको नागरिक
January 31, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
अटाइनअटाई खाँदिएका घरगृहस्थीका सामान बोकेको एउटा मिनी ट्रक सडकमा गुडिरहेको देख्नु आफँैमा कुनै उदेकलाग्दो दृश्य त निश्चय पनि होइन । काठमाडौँ सहरका सडकहरूमा हरेक दिन भनेजस्तो हरेक बाटोमा हिँड्दा यस्तो दृश्य देखिने गर्छ । हुन पनि हो, व्यवस्िथत भएर बस्नका लागि मान्छेलाई कति धेरै सानाठूला कुराहरू चाहिन्छ । हरेक दिन कति मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चराले गुँड सारेजस्तो आफ्नो बास साररिहेका हुन्छन् ।
मान्छे आफ्नो उन्नत भविष्यको चिन्ता गर्छ, अवसरहरूको खोजी गर्छ । मान्छेलाई काठमाडौँले जति अवसरहरू यो देशको अरु सहरले निश्चय पनि दिन सक्दैन । लामो समयदेखि राजधानीकेन्दि्रत विकास योजनाहरू अनि राजनीतिज्ञ, योजनाविद्, प्रशासक र शासकहरूको राजधानीलाई मात्रै देश ठान्ने भ्रमले गर्दा पनि अवसर र पूर्वाधारहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर फैलिन सकेनन् । काठमाडौँ छिर्नु, काठमाडौँमा बस्नु, काठमाडौँको आकाशमा सपनाको इन्द्रेणी देख्नु अनि त्यसको पछिपछि कुद्नु मान्छेहरूका लागि बाध्यता पनि हो, रहर पनि । त्यसैको परण्िातिस्वरूप अहिले थेग्नै नसक्ने जनसंख्याको चापमुनि ठस्ठस् कनिरहेको छ, काठमाडौँ ।
काठमाडौँमा डेरामा बस्नु एउटा यस्तो अनुभव हो, जसले मान्छेलाई निकै तीतामीठा अनुभवहरू सिकाइदिन्छ । डेरामा बस्नेहरूलाई त्यससँग गाँसिएका अनुभवहरूले केही वर्षमा नै बीसौँ वर्षले ल्याउन नसक्ने परपिक्वता पनि ल्याइदिन्छ । पटक्कै सजिलो छैन काठमाडौँमा डेरा गरेर बस्नु । एकातिर त महानगरपालिका भनिने काठमाडौँमा महाअसुविधाहरू छन् । धारामा पानी आउँदैन, तारमा बिजुली आउँदैन । बाटोघाटोको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश सडकहरूको दुर्गति छ । एक-दुईवटा मूलबाटो छोडेर सबैजसो सडकहरू साँघुरा छन् । अनि, ती साँघुरा सडकहरूमा अटेसमटेस गरी मान्छे हिँड्छन्, सवारीसाधनहरू गुड्छन् । फोहोरहरू व्यवस्थापन यति असरल्ल छ, कहिलेकाहीँ त आधाभन्दा बढी बाटो गन्हाउने फोहोरका अवसादहरूले ढाकिएका हुन्छन् । धेरैजसो टोलहरूमा भवितव्य परेका बेला एम्बुलेन्स वा दमकल छिर्नेसम्म बाटो छैन । कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, करोडौँका भाऊ लगाइने घर बनाउने मान्छेहरूलाई कतै आफू वा आफ्ना परविारका कोही बिरामी पर्लान् भन्ने डर पनि लाग्दैन कि क्या हो ! यति धेरै अप्ठ्यारा र असुविधा हुँदाहुँदै पनि डेरा खोज्न जानेहरूका लागि सबैभन्दा पहिले त भाडाले अत्याउँछ । महानगरका दुई-चार आना जग्गामा कुममा कुम जोडेर बनाइएका अँध्यारा, चीसा, पानी नआउने घरहरूमा समेत घरमालिकले आफूखुसी भाउ लगाउँछ, जसमा प्रश्न उठाउने अधिकार भाडामा बस्ने मान्छेलाई हुँदैन ।
घरभाडाको कुनै निश्चित मापदण्ड तोक्नु पर्छ भन्ने कुरामा कसैलाई चासो छैन । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएका घरहरूबाट तिनका मालिकहरूले कति कमाएका छन् र राष्ट्रलाई फुटेको कौडी पनि बुझाएका छन् वा छैनन् भन्ने पनि सायद कसैलाई मतलब नभएको कुरा हो । त्यति मात्र होइन, अधिकांश घरमालिकहरूका लागि उनीहरूका घरमा बस्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरहिरू हुने गर्छन् । यो कुरा उनीहरूको व्यवहार, बोली, हेराइ सबै कुरामा व्यक्त हुन्छ । कौसीमा लुगा सुकाउन डेरावालले जान पाउँदैन । तलको तल्लामा आउने पानीका पाइपहरूको नियन्त्रण घरमालिकले माथिबाट गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि भात पकाउनका लागि पानी चाहियो भने अनुनय र विनय गर्नुपर्छ उसले । सौर्य ऊर्जाबाट प्राप्त हुने तातोपानी पनि डेरावाललाई घरमालिकले नदिन सक्छ । आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता उसले राख्न पाउँदैन । आफूकहाँ आएका पाहुनापातका बारे घरमालिकले सोधेको खण्डमा इतिवृत्तान्त लगाउनुपर्छ । घरमालिकले जुनबेला, जहिले, जसरी र जति पनि भाडा बढाउन सक्छन्, त्यो उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसमा पनि प्रतिवाद गर्न डेरावालले पाउँदैन । गरेको अवस्थामा घरमालिकले कुनै न कुनै बहानामा डेरावाललाई घोक्रेठ्याक लगाउन सक्छ । वर्षौंवर्ष कुनै ठाउँमा बसेर लौ त भन्ने हो भने एउटा घर बनाउनै पुग्ने रकम घरमालिकको पोल्टोमा भरसिकेको भए पनि डेरावाल चुइँक्क गर्न पाउँदैन । जमिन खन्नेहरूको पनि जमिनमा हक हुन्छ, अचेल त सुकुम्बासीहरूका हकका लागि समेत आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, काम हुन थालेका छन् तर जीवनभर एकै थलोमा बसे पनि डेरावाल सधँै सुकुम्बासी नै मात्र हुन्छ । त्यसैले डेरामा बस्नेहरूको समुदायमा एउटा उखानै प्रचलनमा छ, गतिलो घरपट्ट िभनेको भाग्यले मात्रै पाइन्छ र त्यस्ता भाग्यमानी डेरावाल भनेका विरलै हुन्छन् ।
घरमालिकले भनेका कुनै पनि कुरा चाहे ती जायज हुन् वा नाजायज, मानेन भने उसको गलामाथि झुन्डिएको त्यो तरबारको डोरी कुनै पनि बेला चुँडिन सक्छ । घरमालिकको 'इगो'मा आँच आउने कुनै पनि काम उसबाट जानीनजानी भयो भने र डेरावाल एकपटक फेर िआफ्ना सारा कामधन्दा थाँती राखेर काठमाडौँका टोलटोलमा भौँतारनि बाध्य हुन्छ । एक जना सञ्चार क्षेत्रका मित्रलाई उनका घरमालिकले बिजुलीको मिटर उल्टो घुम्ने बनाउने मिस्त्री खोजेर ल्याउन आदेश दिएका थिए । घरमालिकको भनाइमा पत्रकारजस्ता मान्छेले जो पनि चिनेको हुन्छ । तर, त्यस्तो मान्छे खोज्न आफ्नो असमर्थता व्यक्त गरेका कारण चिसिएको सम्बन्धले उनलाई अर्को डेरा खोज्न बाध्य बनायो ।
कुनै ठाउँमा बस्नु भनेको एउटा मान्छेको जीवनशैलीसँग धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ । त्यो घरको कोठाको नापमा उसले भुइँमा कार्पेट ओच्छ्याएको हुन्छ, झ्यालका हिसाबले पर्दा काटेको हुन्छ । त्यहाँ वरपिरकिा मान्छेहरूसँग गाँसिएको हुन्छ ऊ । छेउछाउका पसलहरूमा उसको नियमितताले गर्दा सजिलो भइसकेको हुन्छ उसलाई । गाह्रो-साँघुरो पर्दा, तलब समयमा नआउँदा उधारो चल्ने पनि भएको हुन्छ उसको । ग्यास, चिनी, मट्टीतेल कालोबजारीहरूले लुकाएका बेला पनि उसले खुसुक्क पाउने सम्बन्ध वरपिरकिा पसलेहरूसँग बनेको हुन्छ । छिमेकीमा चिया-खाना खाँदै गफ गर्ने, बिहानबिहान हिँड्न जाँदा सँगै जाने साथीहरू बनाएको हुन्छ उसले । वरपिरकिा केटाकेटीहरूसँग उसका छोराछोरीहरूको मित्रता भइसकेको हुन्छ । त्यो घरभित्र लोडसेडिङ्को अँध्यारोमा पनि कतै घुँडा नठोकिने गरी हिँड्न अभ्यस्त भइसकेको हुन्छ ऊ र उसको परविार । उसको र उसको परविारको जीवनको एउटा पाटो हुन्छ उसको डेरा । तर पनि घरमालिकले आफ्नो सनकको भरमा दिएको आदेशमा ती सबैकुरा चटक्कै छाडेर एकपटक फेर िअर्को नयाँ ठाउँमा शून्यबाट सुरु गर्नका लागि भौँतारनिुपर्छ डेरावाल ।
अचेल समाजका सबै तप्का र वर्गका मानिसहरूका हक र हितका लागि आवाज उठिरहेका छन्, संगठनहरू बनिरहेका छन् । तर, महानगरपालिकामा डेरामा बस्ने दोस्रो दर्जाका नागरकिहरू न संगठित छन्, न त उनीहरूको कुनै हक र अधिकार नै छ ।
January 18, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
January 03, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
आइमाई मान्छेहरूले उमेर घटाउँछन् रे भन्ने सानैदेखि सुनेको हो । त्यसैले होला, कुनै पनि स्वास्नीमान्छेलाई उसको उमेर नसोध्नू भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । हुन पनि एक-दुई अपवादलाई छोड्ने हो भने उनीहरू सकेसम्म आफ्नो वास्तविक उमेर बताउन चाहँदैनन् । उनीहरूलाई सबैभन्दा गाह्रो नै कुनै सरकारी कामकाजका बेलामा नागरकिता वा राहदानी देखाउनुपरेका बेला हुन्छ । डाक्टरको क्लिनिकमा नाम लेखाउँदा पनि उमेर भन्ने बेला चारैतिर पल्याकपुलुक हेरेर सक्नेजति सानो स्वरमा जवाफ दिन्छन् उनीहरू । एकअर्कासँग कुरा गर्दा आफूलाई कम उमेरको देखाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सबै तरकिाहरू अपनाइरहेका हुन्छन् । यी त भए सर्वमान्य केही तथ्यहरू । तर, उमेर घटाउने कुरामा स्वास्नीमान्छेहरूको काँधमा राखेर बन्दुक चलाउने मात्र हो, लोग्नेमान्छेहरू पनि आफूलाई तरुनो र तन्नेरी देखाउने मामिलामा कम हुँदैनन् ।
एक जना चिरपरििचत अभिनेता छन्, जसले आफूलाई कहिल्यै पनि ४० वर्ष काट्न दिएका छैनन् । अर्की एक अभिनेत्रीका बारेमा त भनिन्छ, २८ पछि हरेक वर्ष उनको उमेरले ढिकिच्याउँ खेल्छ रे ! अर्थात्, २८ पछि अर्को वर्ष त उनी २७ हुन्छिन् रे, त्यसको अर्को वर्ष फेर ि२८ अनि अर्को वर्ष पुनः २७ । १७ वर्षमुनिका खेलाडीहरूको प्रतियोगितामा भाग लिनेहरूको उमेर परीक्षा गर्दा थुप्रै जना त्यसभन्दा माथिका पाइए र कारबाहीमा परेको घटना केही समयअघि सार्वजनिक पनि भएको थियो । छिटो अवकाश पाइएला र खोजेको तहसम्म पुग्न नपाइएला भनेर पनि जागिरेहरूले उमेर कम गर्छन् । त्यस्ता महत्त्वाकांक्षी जागिरे, खेलाडी, अभिनेता र चमकदमकको पेसामा लागेकाहरूका लागि त लौ यो मानसिकता भयो रे ! तर, त्यस्ता कुनै बाध्यता नभएका मान्छेहरू पनि यस कुरामा कोहीभन्दा कम हुँदैनन् । मानिसहरूले नागरकिता नै पनि दुईथरी बनाउन भ्याएका हुन्छन् । एक जना परििचतका उनीभन्दा पाँच वर्ष जेठा दाइले दुई वर्ष कान्छो जन्ममिति राखेर दोस्रो नागरकिता बनाएको घटना यहाँनिर स्मरणयोग्य छ । उमेर घटाउने, तन्नेरी हुने र आफूभन्दा अरूलाई पाको बनाउने रहर अक्सर सबै मानिसमा हुने गर्छ । यस्ता मान्छेहरू, जोसुकैलाई पनि 'दाइ' अथवा 'अंकल' भनेर सम्बोधन गर्छन् । तर, उमेर बढ्नु भनेको त्यससँगै अनुभव बढ्नु हो, पाको हुनु हो, ज्ञान बढ्नु हो भन्ने कुरालाई मनन गर्न सक्ने हो भने मान्छेलाई उमेर घटाउने होइन, सायद बढाउने आवश्यकताको अनुभूति हुन्छ होला ।
सायद मान्छेको जीजिविषा नै यस किसिमका मानसिकताका पछाडिको कारक हुनुपर्छ । यो सृष्टिको हरेक वस्तुजस्तै मान्छेको पनि उमेर, विकासक्रम र अन्त्य अवश्यम्भावी कुरो हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि हरेक मान्छे भ्रममा बाँच्न रुचाउँछ । आफूलाई राम्रो हुन्जेल मान्छेले अरूलाई परेको दुःख वा अरूको अभावबाट सिक्दैन । कुनै आफन्त वा मित्रको अप्रत्यासित निधन भएका बेला मलामी गएर र्फकंदा अक्सर सबै मानिस सोच्न बाध्य हुन्छ । हामी सबै पनि कुनै दिन यसैगरी यही बाटो लाग्ने हो भन्ने अनुभूतिले हामीलाई बिथोल्छ । त्यस्तो बेला हामी स्वीकार्छौं, यो तेरो-मेरो भन्ने प्रतिस्पर्धा, यो उपलब्धिको होडबाजी सबै बेकारको कुरा हो । रसिराग र वैमनष्यताका लागि जिन्दगी निकै छोटो छ । मुस्िकलले दुई दिन यो सोच हामीमा रहन्छ । तेस्रो दिनदेखि जिन्दगीको भागदौडमा हामी फेर िमिसिन्छौँ ।
मान्छे आफूलाई अजम्मरी हुँ भन्ने सोच्न चाहन्छ, संसारको सबैभन्दा ठूलो र एउटै मात्र सत्यका बारेमा सोच्न चाहँदैन । त्यसैकारण ऊ आफ्ना सबै कुरालाई दिगो ठान्छ । यही मानसिकताका कारण शारीरकि होस् वा मानसिक, बौद्धिक, राजनीतिक वा आर्थिक कुनै पनि शक्तिको उन्माद मानिसमा चढ्छ । यी सबै उपलब्धिको पनि एउटा निश्चित उमेर हुन्छ भन्ने कुरा मान्छे बिर्सन्छ । सम्झना रहे पनि त्यसलाई स्वीकार्ने होइन, टार्ने प्रयासमा ऊ लागिपर्छ । कृष्णको हातबाट आफ्नो मृत्यु हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि देवकीका हरेक सन्तानको घाँटी निमोठ्ने कंश बनेर मानिस आफ्ना सम्भावित विरोधीहरू, आफ्नो असम्भव स्थायित्वमा तगारा बन्न सक्ने कारकहरूलाई पन्छाउन खोज्छ । त्यस कारण नै मान्छेले अरूलाई दुःखी बनाउँछ । श्ाासक, तानाशाहहरू आफूविरुद्ध उठ्ने आवाजहरूलाई दबाउन खोज्दाखोज्दै अन्ततः आफैँ नाश भएका घटनाहरूको इतिहास साक्षी छ । तर पनि शक्तिको स्वाद चाखेको मानिसमा त्यसको लत लाग्छ । यो लत रक्तबीज भन्ने राक्षसजस्तै हुन्छ । त्यसैले, बेलाबेला एउटा तानाशाहको अन्त्यसँगसँगै अरू तानाशाहहरू जन्मने पनि गर्छन् । यिनीहरूमा लागेको त्यो लत कुनै पनि लागूपदार्थको भन्दा कडा हुन्छ । घरका सामान बेच्नेदेखि लुटपाटसम्म गर्न प्रेरति गर्ने त्यस्ता लत लागेजस्तै यी राजनीतिक दुव्र्यसनीहरू पनि आफूलाई टिकाउनका लागि नैतिकता र स्वाभिमान बेच्न पनि पछि पर्दैनन्, नरसंहार मच्चाउन पनि पछि पर्दैनन् ।
तर, उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि कुरा चिरस्थायी छैन । यो विशाल सृष्टिको युगौँदेखि चलिआएको अनन्त प्रक्रियाको हामी सबै एउटा क्षीणभन्दा पनि क्षीण भाग मात्र हौँ । हामी र हाम्रा कुनै पनि कुराहरू अजर छैनन् । दिगो, चिरस्थायी र अमर रहन केही सक्छन् भने ती हाम्रा विचार र कर्म मात्र हुन्, भौतिक होइन । सुविचार र सत्कर्म गरेकाहरूलाई पुस्तौँपुस्ताले सम्झेर श्रद्धा गर्छ, कुविचार र दुष्कर्म गर्नेहरूलाई सराप्छ । समयले अरू हरेक चीजलाई भुलाउँछ तर आफ्ना लागि मात्र नभएर अरूका लागि बाँचेकाहरू भने सम्झना र इतिहासमा अमर हुन्छन् । त्यसैले अमर र अजर हुन चाहनेहरूले सोच्नुपर्ने कुरा यति मात्र हो, भोलिको समयले हामीलाई कसरी सम्झोस्, श्रद्धाले वा श्रापले ।